असीमित मोबाइल इन्टरनेट के हो?
असीमित मोबाइल इन्टरनेट भनेको तपाईंको मोबाइल फोनमा इन्टरनेटको लागि प्रिपेड सदस्यता सेवा हो। मोबाइल इन्टरनेट योजना नि:शुल्क एयरटाइम र SMS (UMI 38 मात्र) मा आउँछ। सदस्यता UMI 20, UMI 30, UMI 38 र UMI 50 मा उपलब्ध छ। सबै UMI योजनाहरू 30 दिनको लागि मान्य हुन्छन्। यो बन्डलको आनन्द लिन तपाईंको USIM सक्रिय रहेको हुनुपर्छ।
असीमित मोबाइल इन्टरनेट कसले सक्रिय गर्नसक्छ?
U Broadband सेवाका ग्राहकहरू बाहेकका सबै U Mobile प्रिपेड प्रयोगकर्ताहरूले यो बन्डललाई सक्रिय गर्न सक्छन्।
मैले असीमित मोबाइल इन्टरनेटलाई कसरी सक्रिय गर्न सक्छु?
चरण 1 – Launch MyUMobile एप लन्च गर्नुहोस्
चरण3– UMI मेनुबाट आफूले चाहनुभएको असीमित मोबाइल इन्टरनेट योजना चयन गर्नुहोस्
चरण 1 - *118*3*1*1# डायल गर्नुहोस्
चरण2- आफूले चाहनुभएको असीमित मोबाइल इन्टरनेट योजना चयन गर्नुहोस्
वा वा वा वा लेखेर SMS बाट 28118 मा पठाउनुहोस्। कृपया सफल UMI सक्रियकरणको लागि आफूसँग पर्याप्त ब्यालेन्स छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। उदाहरण UMI 30 सक्रियकरणको लागि RM30।
3X डाटा प्रोमोको लागि को योग्य हन्छ?
3X डाटा प्रोमो UMI 30 र UMI 50 का साथसाथै इन्डोनेसिया, CI 30 र CI 50 मा प्रोमोसनको अवधिमा म्यानुअल खरिद वा स्वतः नवीकरण गरी लागू हुन्छ।
3X डाटा प्रोमोको प्रोमोसन अवधि कति हो?
प्रोमोसन अर्को सूचना नआउँदासम्मको सीमित समयको लागि मान्य हुन्छ।
Video-Onz कोटा 3X डाटा प्रोमोको भाग हो?
यो प्रोमोमा Video-Onz कोटा अपरिवर्तित रहन्छ।
यो योजनाको मान्यता अवधि के हो? मैले सदस्यता वा नवीकरणको अवधि कसरी गणना गर्नसक्छु?
सदस्यता तपाईंको सेवा सक्रियकरण गरिएको दिनमा सुरु हुन्छ र 30 दिनको अन्त्यमा (तपाईंको UMI योजना नवीकरण गर्न तपाईंको प्रिपेड खातामा न्युनतम ब्यालेन्स हुनुपर्नेछ) स्वतः नवीकरण गरिनेछ।
मेरो सदस्यता मासिक स्वतः नवीकरण गर्ने बेला भएको छ भनी मैले SMS रिमाइन्डर प्राप्त गर्नेछु?
हो। तपाईंको स्वत: नवीकरण गर्ने समय आउँदा नवीकरणको अघोल्लो दिन 1 SMS सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईंको सदस्यता नवीकरण भइसकेपछि अर्को गरी2वटा SMS प्राप्त गर्नुहुनेछ।
मलाई मासिक स्वतः नवीकरण सफल वा असफलभएको सूचित गरिनेछ?
मैले मेरो UMI योजनाको Video-Onz, Music-Onz र Free 2am-10am Streaming कोटालाई सदस्यता लिने वित्तिकै प्रयोग गर्न सक्छु?
तपाईंले यी सेवाहरू सक्रिय गरिएको SMS प्रमाणीकरण प्राप्त गरेपछि यी सेवाहरू प्रयोग गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।